5 ဇန်နဝါရီလ 2022 ထိပ်တန်း Cryptocurrency ပွဲစားများ - Pros & Cons အဝတ်မခြုံဘဲ!
2 ကုန်သွယ်မှု Affiliate အစီအစဉ်ကိုလေ့လာပါ
ထိပ်တန်း Cryptocurrency ပွဲစား ၅ ယောက် - ဘယ်ပွဲစားကအကောင်းဆုံးလဲ။ 5
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 19 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2021
သင်ဟာ အသစ်အဆန်း ကုန်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကောင်းဆုံး crypto ပွဲစား ပထမဦးဆုံးအကြိမ်၊ သို့မဟုတ် ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေရာတွင် ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်တစ်ဦး၊ cryptocurrency ပွဲစားများသည် ၎င်းတို့၏ရာနှင့်ချီရှိနေသည်။ ၎င်းသည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံး ပွဲစားတစ်ဦးကို ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း မည်သည့်ပလက်ဖောင်းနှင့် အကောင့်ဖွင့်ရမည်ကို သိရှိခြင်းသည် လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်ပါ။
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးကို ဆွေးနွေးသည်။ cryptocurrency ပွဲစား လက်ရှိ UK စျေးကွက်တွင်ရှိသည်။ ပွဲစားအသစ်ကိုရွေးချယ်သည့်အခါတွင် သင်ရှာဖွေရမည့်အချက်များစွာကို စူးစမ်းရှာဖွေပါ - စည်းမျဉ်း၊ အခကြေးငွေ၊ ပျံ့နှံ့မှု၊ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု၊ နှင့် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ။
မှတ်ချက် - Cryptocurrency ပွဲစားများသည်ယူကေတွင်အများအားဖြင့်မထိန်းချုပ်ဘဲလည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုအရာများနှင့်အတူ CFD ထုတ်ကုန်များမှတဆင့် cryptocurrencies ကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါကပွဲစားများသည် FCA သို့မဟုတ် CySEC နှင့်လိုင်စင်ယူထားလေ့ရှိသည်။
5 သင်၏ စစ်ထုတ်မှုများနှင့် ကိုက်ညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ
1 သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသည်။
$250 နဲ့ သင်ရနိုင်ပါတယ်။
တကယ့် cryptos နှင့် crypto CFDs များကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပါ။
အပ်ငွေအာမခံဖြင့် လိုင်စင်ရ ပွဲစား
$250 ဖြင့် သင်ရနိုင်သည်။
CFDs များသည် ရှုပ်ထွေးသောတူရိယာများဖြစ်ပြီး leverage မှတဆင့် ငွေမြန်မြန်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားပါသည်။ လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အကောင့်များ၏ 75% သည် ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံမှ CFDs များကို ရောင်းဝယ်သောအခါတွင် ငွေဆုံးရှုံးသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် ᏟᖴᎠs များကို ရောင်းဝယ်သည့်အခါ လက်လီအကောင့်များ၏ 75.3% သည် ငွေဆုံးရှုံးသည်။ ᏟᖴᎠ များသည် ရှုပ်ထွေးသော တူရိယာများဖြစ်ပြီး အရှိန်အဟုန်ကြောင့် ငွေမြန်မြန်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ မြင့်မားသည်။
CFD ကုန်သွယ်မှုအတွက် cryptocurrencies အများအပြား
အနည်းဆုံးအပ်ငွေ - $ 20
CFD များသည် leverage ကြောင့် ငွေမြန်မြန်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသော ရှုပ်ထွေးသောတူရိယာများဖြစ်သည်။ လက်လီရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအကောင့်များ၏ 72.6% သည် ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် CFD များကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ငွေဆုံးရှုံးသွားပါသည်။
နောက်ထပ် + တင်ပါ။
အတိုချုပ်ပြောရရင်၊ cryptocurrency ပွဲစားသည် Bitcoin ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ethereumနှင့် Ripple ။ သင်ငွေစာရင်းဖွင့်ရန်၊ ရန်ပုံငွေထည့်ရန်နှင့်သင်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်မည်ဆိုပါကသင်မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်နှင့်ပွဲစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်စားဝယ်ယူမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းအာကာသတွင် cryptocrency ငွေကြေးပွဲစားများသည်နှစ်မျိုးရှိသည်။ သင်ရွေးချယ်သောတစ်ခုသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်သည်။ ၎င်းတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကိုသူတို့၏အပြင်းထန်ဆုံးပုံစံဖြင့် ၀ ယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် cryptocurrency ပွဲစားများပါဝင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ဒင်္ဂါးများကိုပုဂ္ဂလိကပိုက်ဆံအိတ်ဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်အချို့သောကုန်သည်များသည် CFD ထုတ်ကုန်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် cryptocrency ငွေကြေးပွဲစားများကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုမပိုင်ဆိုင်ဘဲ cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သိုလှောင်မှုအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ထို့အပြင် CFD ပွဲစားများကသင့်အား cryptocurrencies တိုတောင်းရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ပစ္စည်း၏တန်ဖိုးကျသွားမည်ဟုသင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
ရိုးရာပွဲစားများနှင့်ဆင်တူသည်မှာ cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင်အခကြေးငွေပေးရလိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်ယင်းသည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးနှင့်တွက်ချက်သည့်ကော်မရှင်ပုံစံဖြစ်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်သင်ငွေပေးချေရန်လိုသည်။ CFD cryptocurrency ပွဲစားကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ကော်မရှင်ကနေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကုန်သွယ်နိုင်လိမ့်မယ်။ သင်, သို့သော်, ၏ပုံစံအတွက်အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ပျံ့နှံ့.
Cryptocurrency ပွဲစားများ၏အကောင်းအဆိုး cons
သငျသညျ multi- ဘီလီယံပေါင် cryptocurrency မြင်ကွင်းတစ်ခုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်
CFDs မှတဆင့် cryptocurrencies တိုတိုနိုင်ခြင်း
Cryptocurrency ပွဲစားများသည် ၂၄/၇ အခြေခံအားဖြင့်လည်ပတ်သည်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစရိတ်များသည် ပိုမို၍ ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်လာသည်
အချို့ cryptocurrency ပွဲစားများကို FCA မှထိန်းချုပ်သည်
အချို့ cryptocurrency ပွဲစားများသည်စည်းမျဉ်းမရှိသောနည်းဖြင့်လုပ်ကိုင်ကြသည်
ယူကေနေရာတွင် cryptocurrency ပွဲစားများအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည် - သင့်အား cryptocurrencies ကို ၁၀၀% လုံး ၀ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုသည့်ပွဲစားများနှင့် CFDs မှတစ်ဆင့် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသောပွဲစားများဖြစ်သည်။
🥇ကိုယ်ပိုင် Cryptocurrencies လုံးလုံးလြားလြား
သင်က Bitcoin ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသော cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကြိုးစားနေလျှင်၊ သင်ပိုင်ဆိုင်မှုကို ၁၀၀% လုံးလုံးပိုင်ဆိုင်လိုလျှင်၊ အထူးကျွမ်းကျင်သော cryptocurrency ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အယူအဆမှာဒင်္ဂါးများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ယူမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာ၎င်း၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများပါ ၀ င်သည်။
တစ်ဖက်တွင်၊ ဒင်္ဂါးများကိုပုဂ္ဂလိကပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အရာပင်ဖြစ်ပါစေသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှု၌သူတို့အမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ပွဲစားပြိုကျဖို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဒင်္ဂါးပြားများကိုသင်ကိုယ်တိုင်သိမ်းဆည်းခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။ အကြောင်းမှာမကောင်းသောသရုပ်ဆောင်များကိုအသုံးပြုသူသည်လုံခြုံရေးအကာအကွယ်များတပ်ဆင်ရန်ပျက်ကွက်ပါကပုဂ္ဂလိကပိုက်ဆံအိတ်များကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည်။
အရေးကြီးသည်မှာသင်၏ဒင်္ဂါးများကိုသိုလှောင်ရန်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းတို့အားဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုထဲတွင်သိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်အင်တာနက်နှင့်ဘယ်သောအခါမျှဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်ဒင်္ဂါးပြားများကိုငွေလွှဲပြောင်းပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတော်လေးရှုပ်ထွေးစေသည်။ သို့သော်၎င်းသည် cryptocurrencies ကိုလုံးလုံးလျားလျားပိုင်ဆိုင်သည့်အခါသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အပေးအယူဖြစ်သည်။
a Cryptocurrency CFD ပွဲစားနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း
သင်ရရှိနိုင်သည့်ဒုတိယရွေးချယ်စရာမှာ cryptocurrency CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ စတော့ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့်ကုန်စည်များကဲ့သို့သောအခြား CFD ထုတ်ကုန်များနည်းတူသင်သည်နောက်ခံ cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစား, သင်မျှသာစျေးကွက်သွားလိမ့်မည်လမ်းအပေါ်ထင်ကြေးနေကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင် Bitcoin ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးလာမည့်ရက်များ (သို့) ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းတန်ဖိုးတိုးလာမည်ဟုထင်လျှင် CFD များသည်၎င်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ CFD များသည်သင့်အား Bitcoin တွင်စျေးပေါ။ မြန်ဆန်စွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင် CFDs များကသင့်အားသြဇာသက်ရောက်မှုအပြင်တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်သင့်အားရွေးချယ်သည်။
ယခင်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကောင့်ထဲရှိသင့်ထက်ပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ နောက်တစ်ခု - မင်းသွားတဲ့ cryptocurrency ရဲ့တန်ဖိုးကိုမှန်းပြီးပြီ ဆင်း။ CFD ၏ cryptocurrency ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်း၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာစင်ကာပူနိုင်ငံရှိ UKA FCA သို့မဟုတ် CySEC မှပလက်ဖောင်းများအားမကြာခဏထိန်းချုပ်သည်။
မကြာသေးမီကမှအစစ်အမှန်ကမ္ဘာငွေဖြင့် cryptocurrencies ကို ၀ ယ်ရန်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးပွဲစားများသည်ငွေပေးချေသူများမှလိုအပ်သောအစိမ်းရောင်အလင်းကိုမရရှိနိုင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာကတော့သင်ဟာငွေမသွင်းတဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်ဆီကိုငွေလွှဲပြောင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာလိမ်လည်မှုပဲ။
သို့သော်ယခု cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ယခုအခါပေါင်ဘီလီယံပေါင်းများစွာသောစျေးကွက်နှင့်အတူနေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုထောက်ပံ့သော cryptocurrency ပွဲစားများ၏အမှိုက်ပုံများရှိသည်။ ၎င်းတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
လာမယ့်အပိုင်းမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း၊ cryptocurrencies ပွဲစားများသည်ရံပုံငွေတွေကိုငွေထုတ်ယူတဲ့အခါမှာသင့်ကိုအခကြေးငွေပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏကိုသင်ဖြည့်ဆည်းရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။
Cryptocurrency ပွဲစားများသည်ငွေရှာခြင်းလုပ်ငန်း၌လုပ်ကိုင်နေကြသောကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်မီသတိထားမိရန်လိုအပ်သောအဖိုးအခများရှိပါသည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခကြေးငွေပွဲစား -to- ပွဲစားကနေကွဲပြားပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ဒီကိုသင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးသေချာပါစေ။
ငွေသွင်းရန်မလို၊ မလိုအပ်သည်မှာအချက်နှစ်ချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပွဲစားနှင့်သင်အသုံးပြုလိုသောငွေပေးချေမှုပုံစံ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောပွဲစားအချို့သည်သင့်အားရန်ပုံငွေများကိုအခမဲ့ငွေသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်နည်းသောငွေထုတ်ရန်နည်းလမ်းများရှိသည်။
ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်သောပွဲစားများသည်များသောအားဖြင့်ယင်းပမာဏကိုရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းသာပြုလုပ်ကြလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ cryptocurrency ပွဲစားသည် ၄% ငွေသွင်းပြီး debit ကဒ်ဖြင့်ငွေသွင်းလျှင်သင်£ ၁၀၀၀ သွင်းလိုပါကပေါင် ၄၀ ပေးရမည်။
အချို့သော cryptocurrency ပွဲစားများသည်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သောအခါသင့်အားကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်အားငွေပေးလိမ့်မည်။ သူတို့လုပ်ရင်ကုန်သွယ်မှုနှစ်ဖက်စလုံးမှာကျသင့်လိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်သည်။
cryptocurrency ပွဲစားသည် ၁% ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကိုကောက်ခံသည်ဆိုပါစို့
သင် Bitcoin ပေါင် ၅၀၀ တန်ဝယ်ချင်တယ်
သင့်အားကော်မရှင်အား£5(£ 1 ၏ ၁%) မှကောက်ခံလိမ့်မည်။
ပေါင် ၇၅၀ ကျသင့်သည့် Bitcoin ကိုသင်ရောင်းလိုသည်
သင့်အားကော်မရှင်အား£ 7.50 (£ 1 ၏ ၁%) မှကောက်ခံလိမ့်မည်။
အထက်ပါဥပမာမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ အစပိုင်းတွင် cryptocurrency နှင့်သင်ရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အချိန်တွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အချိန်တွင်ကော်မရှင်တစ်ခုပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင် CFDs တွင်အထူးပြု cryptocurrency ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားပါကပြန့်ပွားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်ပြန့်ပွားခြင်းသည် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းဈေးတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သဖြင့်သွယ်ဝိုက်ပေးဆောင်ရသည့်အခကြေးငွေဖြစ်သည်။
Bitcoin တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင် cryptocurrency CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုသည်
Bitcoin ၏ 'ဝယ်' စျေးနှုန်း $ 10,000 ဖြစ်ပါတယ်
Bitcoin ၏ 'ရောင်း' စျေးနှုန်းမှာ $ 10,100 ဖြစ်သည်
စျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားခြားနားချက် 1% ပမာဏ
ဆိုလိုသည်မှာသင်အောင်မြင်မှုကိုအနည်းဆုံး ၁% အောင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်
မှတ်ချက် - CFD ပွဲစားများအများစုသည်သင့်အားကော်မရှင်မပါဘဲကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပေးရမည့်တစ်ခုတည်းသောအခကြေးငွေမှာပြန့်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများစုသည်ရှာဖွေရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ Bitcoin ဝယ်ဖို့, ယခုစျေးကွက်အတွက်တက်ကြွစွာအခြား cryptocurrencies ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ယခုရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် 'alt-coins' ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့်၎င်းသည် Bitcoin ထက်မတည်ငြိမ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ငွေထုတ်ချေးမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသည်။
Alt-coins များသည် Bitcoin ထက် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင် Alt-Coins များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလားအလာရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ cryptocurrency ပွဲစားများကထောက်ပံ့သောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတိုင်းကိုစာရင်းပြုစုထားသော်လည်းဤဆောင်းပါး၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက်ကျော်လွန်နေသော်လည်းအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းသင်အရောင်းအ ၀ ယ်အများဆုံးဒင်္ဂါးများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
coin Bitcoin ငွေသား
🥇 Binance ဒင်္ဂါးပြား
တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုသည်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကျမည်ဟုထင်မြင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Bitcoin သည်လက်ရှိအချိန်တွင်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးရှိသည်ဟုထင်လျှင်၎င်းသည်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းစျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်ဆိုပါကသင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတိုတောင်းရန်လိုလိမ့်မည်။
သင်ဤသို့လုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ CFDs တွင်အထူးပြုသည့် cryptocurrency ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပုံမှန်စျေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုမှထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါသင်ကအစရောင်းရန်အမှာစာလိုအပ်သည်။
တိုတောင်းသောရောင်းချမှုတစ်ခု cryptocurrency ပွဲစားမှာအလုပ်လုပ်မယ်လို့ဘယ်လိုအောက်ကဥပမာကိုကြည့်ပါ။
သင်က Bitcoin ကိုနှစ်သက်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းကိုတိုတောင်းဖို့ CFD ပွဲစားကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
Bitcoin သည်လက်ရှိတွင်တပြားလျှင်£ 5,000 ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်
သင်သည်ရောင်းရန်အမိန့်ကိုစုစုပေါင်းပေါင်စတာလင် (၁၀၀၀) တွင်ချထားသည်
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Bitcoin သည်စျေးကွက်များတွင်စတင်ဝင်ရောက်လာပြီးယခုအခါတစ်ပြားလျှင်£ ၄၀၀၀ ကျသင့်သည်
ဤသည် 20% ၏တန်ဖိုးလျှော့ချကိုကိုယ်စားပြုတယ်
သင်၏အမြတ်အစွန်းကို ၀ င်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်မှုမှထွက်ရန် '၀ ယ်ရန်' အမိန့်ကိုချထားသည်
သင်၏ပေါင် ၁၀၀၀ ၏ ၂၀% ကိုအခြေခံပြီးသင်အမြတ်အစွန်းပေါင် ၂၀၀ ရရှိခဲ့သည်
သင့်အနေဖြင့်စွန့်စားရမှုအတွက်ပိုမိုသည်းခံခွင့်ရှိပြီးသင်၏ cryptocurrency အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်သြဇာသက်ရောက်လိုပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်သင်အားသြဇာသက်ရောက်စေမည့်အွန်လိုင်းအာကာသထဲတွင်များစွာသော cryptocurrency ပွဲစားများယခုတွင်ရှိနေခြင်းကြောင့်သင်ကံကောင်းပါစေ။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်ဗြိတိန်တွင်အခြေစိုက်လျှင်သင် ခွန်အား ဥရောပလုံခြုံရေးနှင့်စျေးကွက်အာဏာပိုင် (ESMA) မှချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများဖြင့်ချည်နှောင်ထားရမည်။ အကယ်၍ သင်ဖြစ်ပါက၊ cryptocurrencies အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သောအခါ ၂း၁ ကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများမှကာကွယ်ရန်ကန့်သတ်ချက်များရှိနေသည်။
2: 1 ၏သြဇာအရသင်၏အကောင့်ရှိငွေပမာဏကိုနှစ်ဆရောင်းနိုင်သည်
ထို့ကြောင့်ပေါင် ၅၀၀ ရှိသောလက်ကျန်ငွေသည်သင့်အား cryptocurrencies ပေါင် ၁၀၀၀ တန်ဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည် ၅၀% ကျော်ကျဆင်းသွားပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏£ 500 အနားသတ်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်
2: 1 ၏သြဇာသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက်မလုံလောက်ပါက Crypto Rocket ကဲ့သို့သော cryptocurrency derivative ပွဲစားကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောပွဲစားများသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသောနည်းဖြင့်လည်ပတ်ကြသောကြောင့်သင်သတိထားလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်ထိုးကျသွားပါက cryptocurrencies ကိုသြဂုတ် ၅၀၀: ၁ အထိဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသည်။
သြဇာ ၅၀၀း၁ တွင်သင်သည်သင်၏ cryptocurrency ပွဲစားအကောင့်ထဲသို့သင်ထက်အဆ ၅၀၀ ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်
ဒါကသင်၏အမြတ်ကို 500x နဲ့ချဲ့ထွင်လိမ့်မယ်
အကယ်၍ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည် ၀.၂% (၁/၅၀၀) ထက် ပို၍ ကျပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
မှတ်ချက် - သြဇာသက်ရောက်ခြင်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်ဖြစ်ပါကအန္တရာယ်ရှိသောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောမတည်ငြိမ်မှုမှနေသားတကျသော cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမှုဖြစ်ပါတယ်။
client များနောက်ပိုင်းတွင်သူတို့၏လက်ကျန်တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်နှင့်အတူ cryptocurrency ပွဲစားများဖောက်ထွင်းခံရသည့်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်များကိုသင်ကြားဖူးဖူးသည်။ ပွဲစားအတော်များများသည်ဤဆုံးရှုံးမှုများကိုယခင်ကဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြသော်လည်းများစွာသောသူတို့မှာမူမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည် cryptocurrency ပွဲစားနေရာအတော်များများသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့်လည်ပတ်နေသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအရာအားဖြင့်အမှားများရှိပါကမည်သည့်နေရာမှလှည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သတင်းကောင်းမှာအချို့ပွဲစားများသည်ယူကေနှင့်လိုင်စင်ယူထားသည် FCA ဒါမှမဟုတ်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် CySEC ။ အခြားသူများလည်းလိုင်စင်ကိုင်ထားသည် ASIC သြစတြေးလျတွင်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကဏ္multipleပေါင်းစုံတွင်စည်းမျဉ်းကြီးကြပ်မှုကြီးကြပ်မှုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်သင်၏ရန်ပုံငွေများလုံခြုံမှုရှိစေရန် cryptocurrency ပွဲစားသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်အောက်ပါအချက်များကိုစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
🥇 အေးသိုလှောင်ဖြေ - အကယ်လို့မင်းကရိုးရာ cryptocurrency ပွဲစားကိုသုံးပြီးမင်းကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးတွေကို ၀ ယ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပလက်ဖောင်းကအအေးသိုလှောင်ခန်းကိုသုံးမသုံးစစ်ဆေးသင့်တယ်။ ဤသည်မှာရန်ပုံငွေများကိုအော့ဖ်လိုင်းသိမ်းဆည်းထားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်ပြင်ပဟက်ကာများ၏အခွင့်အလမ်းသည်လုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
🥇 Two-Factor Authenticationဖြေ - Two-factor authentication (2FA) ကသင့်အရစ်ကျအကောင့်မှာ ထပ်မံ၍ လုံခြုံရေးထပ်တိုးပေးသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်၊ သော့အကောင့်လုပ်ဆောင်ချက်တခုခုလုပ်တိုင်းမင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းထဲကိုထူးခြားတဲ့ကုဒ်တခုကိုရေးထည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတွင်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရန်ပုံငွေထုတ်ယူခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
🥇 Multi-Sig ပိုက်ဆံအိတ်ဖြေ - cryptocurrency ပွဲစားက multi-sig ပိုက်ဆံအိတ်တွေကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်၊ ဒီပလက်ဖောင်းကနေထုတ်ယူမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့လက်မှတ်ပေါင်းမြောက်များစွာလိုအပ်တယ်။ ဤတစ်ကြိမ်သည်၎င်းသည်တတိယပါတီဟက်ကာများကိုအဓိကအကာအကွယ်ပေးသည်
🥇စာဝှက်ထားတဲ့ဒေတာဖြေ - အကယ်လို့မင်းကရိုးရာဒက်ဘစ် (သို့) အကြွေးဝယ်ကဒ်နဲ့ငွေသွင်းမယ်ဆိုရင်ပွဲစားရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကအချက်အလက်တွေကိုစာဝှက်ပေးဖို့လိုတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ကဒ်အချက်အလက်များကိုလက်ထဲသို့မရောက်ရှိစေရန်တားဆီးလိမ့်မည်။
Cryptocurrency Exchange: အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်
ဒါကြောင့်ယခုသင် cryptocurrency ပွဲစားများမည်သို့လည်ပတ်၏အထွက်နှင့်အပြင်ကိုသိသောယခုငါတို့ယခုအဆုံးမှအဆုံးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်စဉ်ကိုဆွေးနွေးသွားကြသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သင်သည်မိနစ်ပိုင်းအတွင်း cryptocrency ငွေကြေးပွဲစားတစ် ဦး တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်လိမ့်မည်။
အဆင့် ၁: Cryptocurrency ပွဲစားကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုဆိပ်ကမ်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးသော cryptocurrency ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင် cryptocurrencies သို့မဟုတ် CFDs တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်ဖြစ်စေအခကြေးငွေ, ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ, ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုနှင့်ပြန့်ပွားကဲ့သို့သောသော့ချက်အချက်များကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အောက်ဖော်ပြပါအပိုင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည် cryptocurrency ပွဲစားကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ သင်နောက်ထပ်အကူအညီလိုလျှင်။ သင်ကိုယ်တိုင် cryptocurrency ပွဲစားကိုသုတေသနပြုရန်အချိန်မရှိပါကဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောကြိုတင်စစ်ဆေးထားသောပလက်ဖောင်းများ၏ကောင်းကျိုးများကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။
အဆင့် ၂ - အကောင့်တခုဖွင့်ပါ
သင်သည်ရိုးရာပွဲစားတစ် ဦး သို့မဟုတ် CFD ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ထံမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပမာဏသည်သင်ရွေးချယ်သော cryptocurrency ပွဲစားအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မည်။
အဆင့် ၂ - သင်၏အထောက်အထားကိုစစ်ဆေးပါ
အစိုးရမှထုတ်ပေးသော ID (ပတ်စ်ပို့သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်) နှင့်လိပ်စာအထောက်အထားများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ္တူကူးရန်လုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာပြီးခဲ့သည့်သုံးလအတွင်းရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်သောဘဏ်ရှင်းတမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အသုံးအဆောင်ဥပဒေကြမ်းဖြစ်သင့်သည်။
အဆင့် ၅ - အပ်ငွေရန်ပုံငွေများ
သင်၏အကောင့်ကို cryptocurrency ပွဲစားကအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ငွေအချို့ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ တိကျသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည်ပွဲစားများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်၎င်းတွင်ဒက်ဘစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေလွှဲများပါဝင်သည်။
အချို့ပွဲစားများသည် Paypal နှင့် Skrill ကဲ့သို့သော e-wallets များကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုပါကအခြားငွေသွင်းခြင်းနည်းလမ်းများသည်ချက်ချင်းပင်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၅။ သင်ရွေးချယ်ထားသော Cryptocurrency တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ
ယခုသင် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ သင်ပထမ ဦး စွာသင်ဝယ်ယူလိုသော cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum, etc) ကိုရွေးချယ်ပြီးသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောပမာဏကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
Bitcoin တစ်ခုလုံးကို ၀ ယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်ပွဲစား၏အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်သရွေ့သင်ကြိုက်သလောက်နည်းနည်း ၀ ယ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်၏ငွေလက်ကျန်မှငွေများကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏အကောင့်ထဲသို့ cryptocurrencies ထပ်ထည့်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
မှတ်ချက် - CFD cryptocurrency ပွဲစားကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဟာများသောအားဖြင့်တူညီနေဆဲဖြစ်သော်လည်း၊ သင့်ရဲ့ဒင်္ဂါးတွေကိုထုတ်ယူတဲ့အခါအောက်ပါအဆင့်ကိုလိုက်နာစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အနာဂတ်စျေးနှုန်းကိုတွက်ချက်ရုံမျှသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒင်္ဂါးတွေမတည်ရှိလို့ပါ။
အဆင့် ၆။ Cryptocurrency ပွဲစားမှငွေဒင်္ဂါးများကိုထုတ်ယူပါ
ယခုသင်အသစ်ဝယ်ယူထားသော cryptocurrency ဒင်္ဂါးများကိုပွဲစားမှထုတ်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ပလက်ဖောင်းတော်တော်များများကမင်းရဲ့ဒင်္ဂါးတွေကိုမင်းပွဲစားရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသိမ်းထားခွင့်ပေးပေမဲ့၊ အဲဒါကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပေးလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးသည်မှာပွဲစားတစ် ဦး ကိုမကောင်းသော third-party တစ်ယောက်၏ဖောက်ထွင်းမှုခံရပါကသင်၏ဒင်္ဂါးများခိုးယူခံရခြင်းအန္တရာယ်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏အကြွေစေ့များကိုလျှို့ဝှက် cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ထုတ်ယူသင့်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်သို့ကူးပြီးသင်၏ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာကိုကူးယူပါ။ မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာကို paste လုပ်ပြီးသင်ငွေထုတ်ချင်တဲ့ငွေပမာဏကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ပွဲစားသို့ငွေထုတ်ရန်ရွေးချယ်ပါ။ ဒင်္ဂါးပြားသည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ ၁ နာရီအတွင်းရောက်ရှိသင့်သည် - ပွဲစားသည်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အချိန်မည်မျှကြာသည်ကိုမူတည်သည်။
cryptocurrency ပွဲစားနှင့်အတူ sign up မပြုမီ, ငါတို့သည်အောက်ပါမေးခွန်းငါးခုမေးရန်အကြံပြုလိမ့်မယ်။
cry cryptocurrency ပွဲစားကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသလား။
cry cryptocurrency ပွဲစားသည်သင်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုထောက်ခံပါသလား။
coin ပွဲစားသည်သင့်အား Bitcoin ကိုလုံး ၀ ၀ ယ်ရန်ခွင့်ပြုပါသလား၊ သို့မဟုတ်သင် CFD များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပါသလား။
cry Cryptocurrency ပွဲစားသည်သင်နှစ်သက်သောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး (Bitcoin နှင့် Ethereum) ကိုစာရင်းပြုစုပါသလား။
ထိပ်တန်း Cryptocurrency ပွဲစား ၅ ယောက် - ဘယ်ပွဲစားကအကောင်းဆုံးလဲ။
ဒါကြောင့်ယခုသင် cryptocurrency ပွဲစားအတွက်ထွက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်အဘယ်အရာကိုအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါ, ယခုကြှနျုပျတို့ 2021 XNUMX ၏ထိပ်တန်းပလက်ဖောင်းငါးခုစာရင်းပြုစုသွားကြသည်။ ဤပွဲစားများအားလုံး In-house ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးခဲ့ကြသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်သူများ, ဒါကြောင့်အောက်ပါပလက်ဖောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းကျပ်သောစံကိုက်ညီကြောင်းစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေ။
ယခုအခါ AVATrade မှအဖွဲ့သည်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အထိ Forex အပိုဆုကြေး ၂၀% ကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအများဆုံးအပိုဆုကြေးရရှိရန်သင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
သတိပြုပါ၊ အပိုဆုကြေးရရန်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀ ကိုသင်သွင်းရန်လိုအပ်ပြီးရန်ပုံငွေများကိုမထည့်သွင်းမီသင်၏အကောင့်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ အပိုဆုကြေးထုတ်ယူခြင်းအတွက်သင်ကုန်သွယ်မှု ၀ ယ်လျှင် ၀.၁ တိုင်းအတွက် ၁ ဒေါ်လာရလိမ့်မည်။
Capital.com သည် FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ နှင့် NBRB- ထိန်းညှိထားသော အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ CFDs ပုံစံဖြင့် အားလုံးသည် စတော့များ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုပင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ သင်သည် ကော်မရှင်အတွက် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ပေးဆောင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ပျံ့နှံ့မှုများသည် အလွန်တင်းကျပ်ပါသည်။ Leverage အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုလည်း ကမ်းလှမ်းထားသည် - ESMA ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ အပြည့်အဝ။
အချုပ်အားဖြင့်ယခုအခါအွန်လိုင်းအာကာသထဲတွင်ရာနှင့်ချီသော cryptocurrency ပွဲစားများသည်ဗြိတိန်ဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုအပြည့်အ ၀ ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်သင့်တွင်လိုအပ်သောကိရိယာများရှိသင့်သည်။
၎င်းတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကော်မရှင်များ၊ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်သြဇာစသည့်အဓိကမက်ထရစ်များပါဝင်သည်။ ဤသို့ပြောခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၁ ၏ထိပ်တန်း cryptocurrency ပွဲစားများကိုလည်းစာရင်းပြုစုထားပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုလုပ်ရန်အချိန်မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုထားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
Cryptocurrency ပွဲစားသည် Bitcoin နှင့် Ethereum ကဲ့သို့သောထိပ်တန်းဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကိုသင်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုသည့် third-party platform တစ်ခုဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးအပ်နှံငွေပမာဏသည်ပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်မတူပါ။ ထို့ကြောင့်သင်စာရင်းဖွင့်ခြင်းမပြုမီသင်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ အချို့ပွဲစားများကသင့်ကိုအလွန်နိမ့်သောပမာဏကိုငွေသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်၊ အချို့ကမူ£ 200 သို့မဟုတ်ထိုထက်မကတောင်းလိမ့်မည်။
သင်အသုံးပြုသည့်ပွဲစားအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ CFD ပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုပါကသင်သည်မည်သည့်အပ်ငွေသို့မဟုတ်ထုတ်ယူခကိုမဆိုပေးချေလိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့မည်သည့်ကော်မရှင်ကိုလည်းမဆိုပေးချေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင် cryptocurrencies လုံးလုံးလျားသောဝယ်ယူရန်ရှာနေလျှင်, သင်သိုက်အခကြေးငွေနှင့်ကုန်သွယ်ကော်မရှင်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အမြဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့, စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုစည်းမျဉ်းလည်လည်ပတ်။ သို့သော် cryptocurrency CFD ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချသူများသည်ယူကေဖောက်သည်များအားဝန်ဆောင်မှုပေးလျှင် FCA ထံမှလိုင်စင်ယူရန်လိုအပ်သည်။
Cryptocurrency ပွဲစားများသည်သင့်အား debit / credit card, e-wallet သို့မဟုတ် bank transfer ဖြင့်ရန်ပုံငွေထည့်ရန်ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။
သင်ကသြဇာအပေါ် cryptocurrency အတွဲကိုဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချလိုပါက CFD ပွဲစားတစ်ခုသို့မဟုတ် crypto-derivative platform ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ယခင်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပါကဗြိတိန်ပွဲစားများနှင့်အတူ 2: 1 ကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။
အွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး မှာ cryptocurrencies ကိုကျွန်တော်တိုတောင်းနိုင်ပါသလား။
CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ cryptocurrencies ကိုလွယ်ကူစွာတိုတောင်းနိူင်ပါတယ်။